Ulwazi lwe-USB TYPE-C - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ulwazi lwe-USB UHLOBO-C
Ngokuthandwa kwe-USBUHLOBO-C ports, a wide variety of UHLOBO-C interfaces have come to the market, and they are subdivided into the following categories:
Uhlobo olujwayelekile (umsebenzi ogcwele):
Umsebenzi ojwayelekile ogcwele PD2.0, onedatha ye-USB nokukhishwa kwevidiyo;
Umsebenzi ojwayelekile ogcwele PD3.0, onedatha ye-USB nokukhishwa kwevidiyo.
1. I-USB3.1 GEN 1 (isivinini esilingana ne-USB3.0, i-5Gbps ngegama, isivinini sokudlulisa esilinganisiwe cishe siyi-420M);
I-2.USB3.1 GEN 2 (10Gbps ngegama, isivinini sokudlulisa esilinganisiwe cishe siyi-950M).
1. PD2.0 + USB3.1 GEN 1 (isivinini esilingana ne-USB3.0, i-5Gbps ngegama, isivinini sokudlulisa esikaliwe cishe siyi-420M);
2. PD2.0 + USB3.1 GEN 2 (10Gbps ngegama, isivinini sokudlulisa esilinganisiwe cishe siyi-950M);
3. PD2.0 + USB3.1 GEN 1 (isivinini esilingana ne-USB3.0, i-5Gbps ngegama, isivinini sokudlulisa esikaliwe cishe siyi-420M);
4. PD2.0 + USB3.1 GEN 2 (10Gbps ngegama, isivinini sokudlulisa esilinganisiwe cishe siyi-950M).
4. Only USB2.0, manufacturers who use Micro USB can't sit still, and funny changed the Micro USB terminal to the USB UHLOBO-C terminal.
Ukufingqa, abakhiqizi abaningi befoni ephathekayo, kufaka phakathi izincwadi eziningi zokubhala, banemibala yabo, ngoba imisebenzi ehlukahlukene ye- "USBUHLOBO-Citheku "lenza ukuthi imakethe ngayinye ingene, ngakho-ke ukwenza umsebenzi wamakhasimende wesiteshi sokumisa kuyisineke.